Shiinaha Nooca Furan Sheet Birta Fiber Laser Goynta Mashiinka iyo Warshad | Koob
Qaab No.: KF3015
KF3015 nooca furan ee mashiinka goynta leysarka fiber-ka ayaa inta badan loo isticmaalaa goynta xaashida birta. 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W iyo 6000W ayaa la heli karaa.
Qalabka lagu dabaqi karo ee Mashiinka Goynta Laser Fiber
Goynta birta aan birta ahayn, birta kaarboonka ah, birta khafiifka ah, birta daawaha ah, birta galvanized, birta silikoonka, birta guga, xaashida titanium, xaashida galvanized, xaashida birta, xaashida inox, aluminium, naxaas, naxaas iyo xaashi kale oo bir ah, saxanka birta, tuubada birta iyo tuubo, iwm
Warshadaha Khuseeya ee Fiber Laser Goynta Machine
Qaybaha makiinadaha, korantada, been-abuurka birta, kabadhada korantada, qalabka jikada, guddiga wiishka, qalabka qalabka, xarkaha birta, waraaqaha calaamadaha xayeysiinta, laambadaha nalalka, farsamada birta, qurxinta, dahabka, qalabka caafimaadka, qaybaha gawaarida iyo meelaha kale ee jarista birta.
Jirka Mashiinka Ka Adag
Jirka birta ah ee goyhani wuxuu soo maray daaweyn kuleyl ah 600 ° C, waxaana lagu qaboojiyaa foornada 24 saacadood. Ka dib markii tan la dhammeeyo, waxaa lagu farsameeyaa iyadoo la adeegsanayo mashiinka mashiinnada lagu shubo oo lagu dhejiyo iyada oo la adeegsanayo kaarboon laba ogsaydh. Tani waxay hubineysaa inay leedahay awood sare iyo nolol adeeg 20 sano ah.
Jiilka Saddexaad ee Tuurista Aluminium
Waxaa lagu soosaaray halbeegyada aerospace waxaana sameeyay 4300 tan oo wax taaj oo kale ah oo wax lagu duubo. Ka dib daweynta gabowga ka dib, xooggeedu wuxuu gaari karaa 6061 T6 taas oo ah awoodda ugu xoogan ee dhammaan noocyada kala duwan. Aluminiumka duulimaadka wuxuu leeyahay faa iidooyin badan, sida adkeyn wanaagsan, miisaanka fudud, iska caabinta daxalka, ka-hortagga oksaydhka, cufnaanta hoose, oo si weyn u kordhisa xawaaraha hawsha.
Switzerland Raytools Laser Madaxa
Lagu dabaqi karo dhererka kaladuwan ee kala duwan, oo ay xukumaan nidaamka xakamaynta qalabka mashiinka. Barta ujeedada ayaa si otomaatig ah loogu hagaajin doonaa habka goynta si loo gaaro saameynta ugu wanaagsan ee jarista xajmiga xajmiga kala duwan ee birta ah. Kordhinta dhererka diiradda daloolka, gooni u dejinta dhererka dhererka dhererka iyo goynta dhererka focal, hagaajinta saxnaanta goynta.
Nidaamka Xakamaynta CYPCUT
Nidaamka Xakamaynta CYPCUT wuxuu xaqiijin karaa qaabka garaadka leh ee jarista sawirada wuxuuna taageeri karaa soo dejinta sawirro badan, adoo hagaajinaya amarada goynta si otomaatig ah, raadinta geesaha si xeel dheer iyo otomaatig ah. Nidaamka xakamaynta wuxuu qaataa barnaamijka ugu macquulsan iyo isdhexgalka barnaamijka, wuxuu bixiyaa khibrad hawlgal oo la yaab leh, si wax ku ool ah kor loogu qaado ka faa'iideysiga biraha iyo yareynta qashinka. Nidaam hawlgal fudud oo dhakhso leh, tilmaamo wax ku ool ah oo sax ah, oo si wax ku ool ah u hagaajiya khibrada isticmaalaha.
BCS100 Maamulaha Dhererka Capacitive
BCS100 xakamaynta dhererka capacitive (hadda kadib loogu yeero BCS100) waa aalad koontarool waxqabad sare leh oo adeegsanaysa habka xakamaynta wareegga-wareegga. BCS100 waxay sidoo kale bixisaa xiriir isgaarsiineed Ethernet gaar ah (TCP / IP protocol), waxay si fudud ugu guuleysan kartaa howlo badan kombuyutarka CypCut, sida raadraaca otomaatiga ah ee dhererka, daloolin kala qeybsan, daloolin horusocod ah, raadinta cirifka, boodboodka, qaab aan macquul aheyn ee sare u qaadista Heerka jawaabta sidoo kale si weyn ayaa loo hagaajiyay. Gaar ahaan dhinacyada xakamaynta adeegga, xawaaraha socodkiisa iyo saxnimadiisa waa inay si cad uga fiicnaadaan alaabooyinka kale ee la midka ah, iyadoo loo aaneynayo laba xirmo oo loo yaqaan algorithm oo xawli ku socda iyo xawaare. Taageerada alaarmiga inta aad garaacayso sabuuradda iyo geesta geeskeeda. Taageer ogaanshaha cirifka iyo kormeerka otomaatiga ah.
Aagga Goynta Xaashida
X / Y-dhidibka Meeleynta Saxnaanta
X / Y-dhidibka Xakamaynta Saxnimada
Ugu badnaan Dardargelinta
Ugu badnaan xawaaraha isku xidhka
xawaare m / min
Hore: Sheet Birta Oo Tube Fiber Laser Goynta Machine From Shiinaha
Xiga: 1390 Birta iyo nonmetal CO2 Laser xardha Oo magaabay
Full xiran Fiber Laser Goynta Machine Waayo Sta ...
Carbon ahama Steel Fiber Laser magaabay wiil Iyadoo ...
1000W 1500W 2000W Sheet Small Birta Fiber Laser ...
Automatic Tube Birta Oo tuuboyinka Fiber Laser Cutti ...
4KW 6KW 8KW Steel CNC Fiber Laser Goynta Machi ...
Sheet Birta Oo Tube Fiber Laser Goynta Machin ...